၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော GoldManCasino.com သည်လောင်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများအားအရည်အသွေးပြည့်ဝသောဖျော်ဖြေမှုများကိုပေးရန်၊ သူတို့ကိုပျော်ရွှင်မှု၊ မျှတမှု၊ တရားမျှတမှု၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်ရွှင်စရာအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတို့တွင်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းအားဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
GoldManCasino.com ၏ပစ္စည်းများကို Soho Office 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်ရှိ ProgressPlay လီမိတက်မှလည်ပတ်သည်။ ProgressPlay သည်မော်လတာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သည် (C58305) Malta Gaming Authority မှလိုင်စင်ချထားပေးပြီး၊ အောက်မှာလည်ပတ် MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ် 16 Aprilပြီ, 2013 ရက်တွင်ထုတ်ပေးခဲ့သည်; ProgressPlay Limited is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive. Play responsibly.
GoldManCasino.com သည်နောက်ဆုံးပေါ် 128 bit bit Secure Socket Layer (SSL) စာဝှက်ခြင်းနှင့် firewall နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးအထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်မှကျွန်ုပ်တို့၏ကာကွယ်ထားသောဆာဗာများသို့လုံခြုံစွာလွှဲပြောင်းပေးသည်။ အွန်လိုင်းခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်စနစ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများကကိုင်တွယ်သည်။ GoldManCasino.com သည်၎င်းအားအဖွဲ့ဝင်များအား e-wallet ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ရရှိနိုင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။